Maraykanka oo weli ka quusan xalka xaalada Khaliijka - BBC News Somali
Maraykanka oo weli ka quusan xalka xaalada Khaliijka
Xoghaya arrimaha dibedda ee Marayakanka Rex Tillerson ayaa ku sugan dalka Kuwait halkaas oo u kaga qaybgeli dooni wadahadalo ujeedadoodu ay tahay in lagu xaliyo xiisada u dhexeysa dowladda Qadar iyo wadamada Khaliijjka.
Bishii aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii Sacuudi Carabiya, Masar, Baxrayn iyo Isutagga Imaaraadka Carabta ayaa xiriirkii diblamaasiyad u jareen dowladda Qadar. iyaga oo ku eedeeyay in ay deganaansho la'aan ka wado gobolka.
Mr Tillerson ayaa khibrad balaaran u leh gobolka, waxaa uuna horey madax uga ahaa shirkad shidaal , waxaana lagu wadaa in u wadahadalo la yeesho madaxda Kuwait, Qadar iyo Sacuudiga.
Afarta dal ee Carbeed ee hogaaaminaya go'doominta ka dhanka ah Qadar ayaa diidmada Doxa ee dalabkooda ku micneeyay halis ammaanka gobolka ka dhan ah.
Qadar oo toddobaadkan horraantiisii diiday dalabka ay soo gudbiyeen dalalkan uu Sacuudigu horkacayo ayaa iska fogaysay eedaymaha loo soo jeediyay.
War ay si wadajir ah u soo saareen isbuuci hore, ayaa Sacuudi Carabiya, Baxrayn, Masar iyo Isutagga Imaaraadka Carabta ay sidoo kale kaga digeen tallaabooyin dheeri ah, waxayana intaasi ku dareen in diidmada Qadar ay ka dhigantahay sida ay u doonayso in ay sii wado siyaasaddeeda ay uga gon leedahay in ay ku burburiso ammaanka gobolka.